ViMa WOODS - Vision Madagascar
Home . ViMa WOODS
ViMa Woods dia mpandray anjara lehibe eo amin'ny sehatry ny ala sy ny ala eto Madagasikara. Ny orinasa dia niorina tamin’ny taona 2010. Izy io dia miantoka ny fitantanana maharitra ny ala. Ny orinasa mpanatsofa hazo dia ao Moramanga, toerana stratejika eo anelanelan'ny renivohitr'Antananarivo sy ny tanànan'ny seranana ao Tamatave.
Forêt de pins : 5 000 hectares
Ala kesika : 5000 hekitara
Karazan-kesika monomboka amin’ny mahazatra ka hatramin’ny tsy dia fahita matetika : Pinus Kesiya, Pinus Caribaea, Pinus Elliottii
Famokarana vokatra indositrialy toy ny palette (mpamokatra palette voalohany eto amin’ny firenena), des planches, des chevrons, des terrasses… Fanodidinana amin’ny Hydrokoat 5 / Kilasy 4 amin’ny Autoclave.
Ny fisian’ny tsena eto Madagasikara, Reunion, Mauritius, Mayotte.
Ny Mpanjifanay lehibe : Ambatovy. Miaraka amin’ny tetik’asa mitentina 8 miliara dolara (novatsian’ny orinasa kanadiana, japoney ary koreana atsimo), ny Ambatovy dia manondrana nikela sy kobalta. Io no orinasam-barotra lehibe indrindra eto amin’ny firenena. Ny fanondranana ny nikela sy kobalta ataon’izy ireo dia atao amin’ny paleta Vision Madagascar.
Isan’ny vokatra ataonay ny hazo fisaka, karazana vatan-kazo matevina ary takela-pisaka (izay nokirakirana tamin’ny alalan’ny Hydrokoat 5/Classe 4 miaraka amin’ny Autoclave).
Lot II J 172 J – Alarobia Ivandry
Tél. +261 (0)32 11 561 65
Mail : vimawoods@visionmadagascar.com